Masuuliyiinta Ay Sahayatay Iyo Kuwa Ay Kuraasida Ku Fadhiisisay Digreetada Madaxweynuhu | Berberatoday.com
Masuuliyiinta Ay Sahayatay Iyo Kuwa Ay Kuraasida Ku Fadhiisisay Digreetada Madaxweynuhu
Hargeysa(Berberatoday.com)-Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Siilaanyo, ayaa magacaabis, isku bedel iyo xil ka qaadis ku sameeyay qaar ka mid ah masuuliyiinta xukuumadda.
Warsaxaafadeed shalay uu madaxtooyada ka soo saaray afhayeenka madaxtooyada Mr. Shamax, ayaa masuuliyiinta xilka laga qaaday ka mid ah guddoomiyihii hay’adda abaabul ka saaranka qaranka Jamaal Caydiid Ibraahim, iyadoo xilkiisii loo magacaabay Ibraahim Axmed Raabi. Sidoo kale madaxweyne Siilaanyo ayaa wakiilka Somaliland ee Itoobiya u magacaabay Danjire Aadan Muuse Jibriil, iyadoo wakiilkii horena laga dhigay wasiirul dawlaha qorshaynta. Guddoomiye-xigeenka hay’adda shaqaalaha dawladda ayaa sidoo kale loo magacaabay Maxamuud Cabdillaahi Xarbi. Warsaxaafadeedka madaxtooyada ayaa u dhignaa sidan “Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo waxa uu digreeto madaxweyne oo summadeedu tahayJSL/M/XILQ/249/1-3881/022016 uu magacaabid, isku-bedel, iyo Xilka qaadis ku sameeyey qaar ka mida Masuuliyiinta laamaha kala duwan ee Xukuumadda.
Mudane, Waxaan kaaga mahadinayaa mudadii aad soo haysay xilka Maareeyaha Hay’adda Abaabul ka saarka Qaranka (NDC). Xilalka Qaranka ayey dabcigeed tahay in ay meerto noqoto oo kolba cid hanan karta loo dhiibo.